BONKE abazali banegalelo kwisiganeko esintsonkothe ngendlela umntu angenakuyiqonda ngokupheleleyo. Ngamnye kubo ufak’ isandla ekubunjweni kwemveku eye ikhule esibelekweni sikanina de ibe ngumntu opheleleyo. Ngoko ke, akumangalisi ukuba xa olu sana luzalwa, abantu badla ngokuthetha ngesi siganeko njengomnye “wemimangaliso yendalo.”
Kambe ke, ukuzala abantwana kusisiqalo nje sembopheleleko yomzali. Ekuqaleni iintsana zixhomekeka kubazali phantse ngento yonke, kodwa njengoko zikhula, kuye kufuneke kunyanyekelwe nezinye iimfuno zazo ngaphandle kwezo zingokwasemzimbeni. Kufuneka zincedwe ukuze zikhule engqondweni, ngokweemvakalelo, ngokokuziphatha nangokomoya.
Eyona nto bafanele bayifumane abantwana ukuze bakhule kakuhle, luthando lwabazali. Nangona amazwi okubonisa uthando ebalulekile, afanele aphelekwe zizenzo. Ewe, abazali bafanele babamisele umzekelo omhle abantwana babo. Bamele babanike ulwalathiso ngendlela yokuziphatha, nemigaqo abafanele baphile ngokuvisisana nayo. Yaye oko bafanele bakuqale besebancinane ukutyhubela iminyaka yokukhula kwabo. Abantwana basenokubangela intlungu, yaye kuba njalo maxa wambi xa bengakhange bancedwe besebancinane.
Eyona migaqo iluncedo kunayo nayiphi na eminye ifumaneka eBhayibhileni. Imiyalelo esekelwe eBhayibhileni ineengenelo ezikhethekileyo. Xa befundiswa le miyalelo, abantwana baye baqonde ukuba oko bakuxelelwayo akuveli nje emntwini, kodwa kuvela kuMdali wabo, uBawo wasezulwini. Oku kwenza isiluleko sibe namandla angenakuthelekiswa nanto.
IBhayibhile ikhuthaza abazali ukuba bazame ngamandla ukubethelela imigaqo efanelekileyo ebantwaneni babo. Noko ke, njengoko abantwana bekhula, abazali badla ngokukufumanisa kunzima ukuthetha nabo ngezona zinto zibalulekileyo. Le ncwadi ithi Funda KuMfundisi Omkhulu, ibhalwe ngenjongo yokuthintela ukuba oko kungenzeki. Inika wena nabantwana bakho ukutya kokomoya eninokukunandipha kunye. Kodwa ngaphezu koko, ibangela ukuba abantwana bakwazi ukuncokola nabanye abazakuba beyifunda nabo le ncwadi.
Uya kuphawula ukuba kule ncwadi kukho imibuzo efanele iphendulwe ngabantwana. Mininzi yaye yenziwe yacaca. Uya kuyibona ngokuba nesikhewu emva kophawu lombuzo (—). Esi sikhewu siyakunceda ukuba unqumame uze ukhuthaze umntwana ukuba agqabaze. Abantwana bayakuthanda ukuba nenxaxheba. Xa ungamvumeli abe nenxaxheba, uyakhawuleza ukuphelelwa ngumdla.
Noko ke, okona kubaluleke ngakumbi, le mibuzo iya kukunceda ufumanise oko kusentliziyweni yomntwana. Kakade ke, umntwana usenokuphendula ngendlela engachananga. Kodwa umbandela oshicilelweyo olandela umbuzo ngamnye uya kumnceda umntwana ukuba ahlakulele indlela yokucinga eyiyo.
Enye inkalo ebalulekileyo yale ncwadi yimifanekiso yayo engaphezu kwama-230. Uninzi lwayo lunemibuzo efuna impendulo yomntwana esekelwe koko akubonayo nakufundileyo. Ngoko yihlolisise nomntwana wakho le mifanekiso. Iluncedo gqitha ekubetheleleni iingongoma ezibalulekileyo aye wazifunda.
Xa umntwana efunda ukulesa, mkhuthaze ukuba ayifunde ngokuvakalayo le ncwadi. Okukhona eyifunda, kokukhona siya kubetheleleka isiluleko sayo esiluncedo engqondweni nasentliziyweni yakhe. Kodwa ukuze wakhe ubuhlobo nentlonelo phakathi kwakho nalo mntwana, yifundeni kunye rhoqo.
Abantwana bangqongwe kukuziphatha okubi ngokwesini, ukusebenzelana nemimoya, nezinye izinto ezingamanyala. Ngoko bafanele bakhuselwe, nto leyo eyenziwa yile ncwadi ngendlela enesidima necacileyo. Kodwa, abantwana bafanele balathiselwe ngokukhethekileyo kuMthombo wabo bonke ubulumko, uBawo wethu wasezulwini, uYehova uThixo. Wayesoloko esenjenjalo uMfundisi Omkhulu, uYesu. Sithemba ngokwenene ukuba le ncwadi iya kunceda wena nentsapho yakho ukuba nikholise uYehova, ukuze anisikelele ngonaphakade.